Mitombo Be Ny Aretina “Chikungunya” Ao Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2014 11:05 GMT
Niparitaka be niely nanerana faritra maro any Karaiba hatramin'ny volana lasa iny ny Chikungunya, aretina iray azo avy amin'ny moka ary miteraka fanaviana sy fanaintanana mafy eny amin'ny vanin-taolana.
Manomboka nandray fepetra hifehezana ireo mpamindra ny aretina ireo manampahefana ao amin'ny Nosy St. Martin ho fampihenàna ny isan'ireo moka “aedes aegypti”, izay tomponandraikitra voalohany amin'ny fiparitahan'ilay otrikaretina; nanomboka nampiasa ny Twitter ireo mpiserasera any amin'ny faritra mba hanavaozana hatrany ny vaovao:
Fanasemporana ny moka hatomboka amin'ny Alakamisy mamerana ny firenena ; entanina handray fepetra hamongorana ny mopka ny mponina rehetra
Misy tranga notaterina ho niseho ihany koa tany amin'ny ilany Holandey amin'ilay nosy:
Minisitry De Weever : Fanadiovana faobe manenika ny firenena hatomboka ny 25 Janoary; Trangan'aretina Chikungunya miisa 10 efa voamarina ; Firenena mitoh…
Nandray fepetra ho fisorohana ihany koa ireo faritany hafa noho ny tatitra hoe misy ilay otrikaretina koa any amin'ireo nosy maro hafa :
#CURACAO : Manao dingana hiadiana amin'ny otrikaretina chikungunya ireo tompondandraikitra ara-pahasalamana taorian'ny fitiliana natao tany amin'ny ilany Holande amin'ilay nosy Saint-Martin
Mbola tsy tratr'ilay aretina chikungunya aloha i Barbados hatreto. Izany no fantatra tamin'ny Ministeran'ny Fahasalamana….
Fiparitahan'ny Chikungunya ao Karaiba. Ankoatra an'i St Martin / St Maarten , dia i Saint-Barth , Martinique , Guadeloupe sy BVI
Ilay Amerikana Profesora mpampianatra Siansa sady bilaogera, Jeff Stratford, dia nilaza fa fotoana fohy sisa no andrasana dia hipongatra any Etazonia ilay otrikaretina:
Nahoana no iheveranao fa ho tonga any Etazonia ny otrikaretin'ny Chukungunya ? Hita manerana an'i Amerika ireo otrikaretina entin'ny moka. Ny otrikaretina rehetra dia mila mamela ny dian-tongony ao Etazonia satria entin'ny olona iray (raiso hoe mpizahatany) efa tratry ny aretina mikoriana any anatin'ny ràny avy any. Avy eo moka “Amerikana” iray no manaikitra ilay olona efa mitondra otrikaretna, mitondra ilay otrikaretina, ary dia misy tsingerina iray vaovao miforona indray.
Hatramin'ny 2005, nisy tranganà otrikaretina voatatitra ho nitranga tany aminà firenena 40 mahery nanerana izao tontolo izao. Azonao atao ny manaraka amin'ny alàalan'ny Twitter ny fivoaran'ny fiparitahan'ilay aretina isaky ny faritra, amin'ny fampiasàna ny tenifototra #chikungunya #caribbean.
Ny hajiantsary nampiasaina ato anatin'ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny .CK, nampiasàna ny Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic Creative Commons license. Tsidiho ny tahirintsary mifandimby ao amin'ny flickr .CK